Top Tips Kubva kuSemalt On Nzira Yokudzivirira Pop-Ups Uye Zvirongwa Pamusoro Penyu Yenyu Android
Kubvisa matanho uye mapikicha zvinoshandura maitiro ako ekutsvaga, kana uchishandisa zvishandiso zveAroid, haisi kungochengetedza foni yako chete asiwo inobatsira kuchengeta data. Ads, pop-ups, uye evhidhiyo mitsaruzhinji haisi yekutengesa chete asi inogonawo kukukanganisa kuchengeteka kweGoogle gadget. Sezvo uri muIndaneti, haufaniri kubhadhara mari yakawedzerwa ekudhinda zvinyorwa zvep-up uye zvivhiringidza zvinoshambadza.
Mumazuva ano mashizha ekutsvaga, spammers nevashambadzi vari kushambadzira kushambadzira kune vashandi vekupedzisira Android gadgets. Kushandisa webhusaiti yevanhu inowedzera dambudziko rekuchengetedza kwako paIndaneti uye kunoshandura iwe unotambudzwa kune vaseki. Mamwe maitiro ave akaiswa mberi kubatsira vashandisi veAroid kuvhiringidzika zvinotyisa pop-ups munguva chaiyo - trkiye microsoft.
Kudzivirira matambudziko anoshungurudza uye mapap-ups kubva pakushandura kwako ndechimwe chezvinhu zvakajeka zvawakamboita paIndaneti. Kudzivirira zvikwangwani zvako kubvira pakuwanikwa nechekunyadzisa kunokosha zvikuru kana zvasvika pakutsvaga.
Pano pane mazano mana anotsanangurwa naIgor Gamanenko, nyanzvi inotungamira kubva Semalt , iyo ichakubatsira iwe kuva neruzivo rwepamusoro paunenge uchitsvaga mapeji makuru webusaiti uchishandisa gadget yako .
Shandisa Chrome browser kuti zvivhare ads
Mimwe mibvunzo yakasimudzirwa pamusoro pekudzivirira huwandu hwevanhu vanoonekwa pane chrome browser. Kudzivirira pop-up ads kuonekwa pachrome yako yekare iri nyore. Vhura chrome yako uye chengetedza mavara matatu akaoneswa pachikona chako chekuru kuruboshwe che browser yako. Sarudza 'Zvirongwa' icon uye uzarure 'Site Settings' icon.
Bhura pasi pasi pakushandura kwe browser yako ku 'Bhuku-Pop-ups'..Sarudza 'Chengetedza pop-ups ads' kudzivirira matanho akazara kubva pangozi nehuwandu hwekutsvaga kwako.
Dhavhidha uye shandisa mhinduro yeAd-blocker browser
Sevashandisi veIndaneti, musarega zvivako zvep-ups zvinokanganisa nhoroondo yako yekutsvaga. Vhura gadget yako yeGoogle Play Store uye tora mu 'Free Ad-blocker browser.' Dhadharira Ad-blocker isina kuiswa uye isa. Nhamba yakanaka yevashandi vachishandisa androids vanosarudza kushandisa Ad-blocker kana ichienzanisa nekudzivirira pop-ups manheru.
Shandisa Opera Browser kudzivisa zvivhiringidza zvinoshambadza
Iwe uri musikana we android ari kushanda kuti ungadzivisa sei kuparadzirwa kwep-up. Kuvhara zvidimbu uye zviitiko zviitiko ndezvokuti iwe-iwe-pachayo basa rinogona kuiswa zvakanaka uchishandisa gadget yako ye android. Vhura gadget yako yeGoogle play store uye teerera shanduro.
Isa uye ushandira musikana wako wepopera usingabhadhari kuti uvhiringidze kushamwaridzana kwemashoko kubva pahutano hwako hwekutsvaga paIndaneti. Vhura ma opera pakusarudza kwako uye chengetedza pa-pop-ups. Dzvanya 'Chengetedza zviratidzo zvepop-up' kuti udzivise kuparadzirwa kwemashamba ekupindira nepurogiramu yako yekushandura.
Shandisai data ye-Android data saver
Sevashandisi ye android, hausi kuda kushandisa deta zvakare kuti uchengetedze kutengesa matangazo uye zviitiko. Data saver inopa vashandisi veIndaneti zvakanakisisa sekutsvaga ruzivo semadzinza anoshungurudza, uye zvirongwa zvekutengesa hazvikwanisi kutakura pane zvigadzirwa. Zvisinei, iwe unogona kudzivirira mudzidzi wako wepa data kana iwe uchiona mifananidzo yakakodzera uye mapeji ewebhu angave anokosha.
Kugonesa mamiriro ekuchengetedza data, zvhura musikana wako uye chengetedza matamba matatu ari kumusoro kwekona. Sarudza browser yako maitiro uye sarudza deta data saver. Gara pa-saver mode kuti udzivise matanho anotsamwisa kubva pangozi nehutano hwako hwepaIndaneti.
Mumwedzi mishomanana yapfuura, mibvunzo ine chokuita nekudzivirira pop-up ads yave ichirova misoro zvese. Usarega zvirevo zvichitadzisa kuwanikwa kwako paIndaneti kushandiswa paunenge uchishandisa gadget yako ye-android. Dzokorora mazano anonyanya kutaurwa pamusoro apa kuti uwane ruzivo rwakakwana rwekutsvaga.